2019 နောက်ဆုံး Anti-အိုမင်းခြင်းဟာမူးယစ်ဆေးဝါး: Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
1 ။ လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Nicotinamide Mononucleotide (NMN)
2 ။ Nicotinamide Mononucleotide နှင့် NAD + +
3 ။ ကြွက်တွေကအပေါ် Nicotinamide Mononucleotide လုပ်ငန်းခွင်၏နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန
4 ။ Nicotinamide Mononucleotide (NMN) မှအကျိုးကျေးဇူးများ
5 ။ Nicotinamide Mononucleotide (NMN) တကယ်လူ့တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား
6 ။ Anti-အိုသည် Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ကိုသုံးပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
7 ။ သင်သိသင့်သ Nicotinamide Mononucleotide ၏ဘေးထွက်
8 ။ ဘယ်မှာငါဆန့်ကျင်အိုမင်းခြင်းဟာမူးယစ်ဆေးဝါး-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Find နိုင်သလား?
9 ။ အကျဉ်းချုပ်
သငျသညျအိုမင်းဆန့်ကျင်သေလွန်သောသူတို့သည်အစုဖြစ်ပါသလား ကောင်းပြီ, anti-အိုမင်းမူးယစ်ဆေးသင့်ရဲ့ဇီဝနာရီကိုနောက်ပြန်ဆုတ်၏ခြောအများဆုံးယုံကြည်စိတ်ချရသော option ကို။ တစ်ဦး Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ၏အရေးပါသောသွင်ပြင်လက္ခဏာမှာကြည့်, senescence အတွက်၎င်း၏အခန်းကဏ္ဍနှင့်ဘယ်လိုကုသမှုဆည်းပူးဖို့ရှိသည်။
ကြီးထွားလာအဟောင်းကိုမလွှဲမရှောင်သည်။ သို့သျောလညျးကို အသုံးပြု. အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ပြန်ဆုတ်များအတွက်အလားအလာရှိရဲ့ Nicotinamide Mononucleotide။ ငါသည်သင်တို့ကိုဝင်းလူ့ဆဲလ်အတွင်းဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာကိုမှော်အပေါ်ပြည့်စုံသောသတင်းအချက်အလက်ပေးခြင်းပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သင့်ရဲ့မြင်းတပ်ကိုကိုင်ထားပါ။
ဒါဟာယုံကြည်ချက်ဖြစ်ကောင်းသင်သည်ကြီးတွေပြောဆိုရပါလိမ့်မယ်သောအကောင်းဆုံးအရာပါပဲ။ သင်တို့ရှိသမျှသည်သင်၏အသားအရေကျော်အရေးအကြောင်းတွေကိုသတိပွုမိ start သည့်အခါမည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, သင့်အပြုံးခဏတာဖြစ်လိမ့်မည်။ ပိုကဘာလဲ, အိုမင်းနှစ်ဦးစလုံးရုပ်ပိုင်းနှင့်သိမြင်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုသက်ရောက်သည်။
ရဲ့ကရင်ဆိုင်ရကြပါစို့။ Anti-အိုမင်းမျက်နှာလိမ်းဆေးနှင့်အလှကုန်ပစ္စည်းခွဲစိတ်ဒီစမတ်ရာစုအတွင်းအရာအတွက်ပါပြီ။ အဘယ်အရာကိုသင်သိရန်လိုအပ်သည်, ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများရေတိုရေရှည်ဖြစ်ကြပြီးအကြီးအကျယ်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။
လက်တွေ့ကျကျ, သင်ပထမဦးဆုံးအသက်-related အခြေအနေများအတွက်တစ်ကဏ္ဍမှပါသောဆယ်လူလာနှင့်ဇီဝကမ္မဖြစ်စဉ်များကိုနားလည်သဖြင့်အိုမင်းတိုက်ဖျက်ဖို့သင့်၏။ အဲဒီနောက်သူက senescence ဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေ၏ယန္တရားများကောက်ချက်ချရန်လွယ်ကူဖြစ်လာသည်။ Anti-အိုမင်း Nicotinamide Mononucleotide နုပျို restore မှအလုပ်လုပ်ပါတယ်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်လက်ျာဘက်, လျောက်ပတ်အသက်အရွယ်လိုသလား? ကောင်းပြီ, ဒီသရုပ်မှန်သင့်ခန္ဓာကိုယ်အားနည်းသွားစေရန်ဆက်လက်သည့်အခါလက်တွေ့ဖြစ်နိုင်ဖို့ထွက်လှည့်စေခြင်းငှါ, သငျသညျစိတျနှလုံးအရောဂါများအမျိုးမျိုးတို့ကိုတစ်သံလိုက်ဖြစ်ခြင်းတက်အဆုံးသတ်, အယ်လ်ဇိုင်းမား, မှတ်ဉာဏ်ဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ထို့ထက် ပို. ။
ဒါကြောင့်အားလုံး Nicotinamide Mononucleotide ပတ်သက်. ပျော့သွားတာကိုကဘာလဲ? ငါ့ကိုရှင်းပြပါရစေ။
NMN alpha (α) နှင့် beta ကို (β) ပုံစံများကိုနှစ်ဦးစလုံးအတွက်တည်ရှိ။ သို့သော်β-NMN အရှိဆုံးတက်ကြွစွာပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် bioactive ဘေ့ nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide သို့မဟုတ် NAD + + ၏ biosynthesis တစ်ခုအလယ်အလတ်ဖြစ်ပါတယ်။
ဤသည်ဒြပ်ပေါင်းများသဘာဝကျကျထောပတ်သီးခရမ်းချဉ်သီး, သခွားသီး, ဂေါ်ဖီထုပ်, ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနှင့်ကုန်ကြမ်းအမဲသားထဲမှာရှိနေပြီ။ ဓာတ်ခွဲခန်းမှာ, nicotinamide mononucleotide အမြောက်အများအမှုန့်အဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။
ယင်း၏ကုန်ကြမ်း form မှာ, က CAS အရေအတွက်ကိုနှင့်အတူသတ်မှတ်, 1094-61-7။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းထိုကဲ့သို့သော nicotinamide riboside နှင့်ဖော့စဖိတ်အုပ်စုတစ်စုအဖြစ်တစ်ဦး nucleoside အကြားတုံ့ပြန်မှုကနေဖြစ်ခြင်းသို့ကြွလာ။
preclinical လေ့လာမှုများများတွင်ကြွက်အပေါ် Nicotinamide Mononucleotide အလုပ်ဆယ်လူလာထဲကဓာတုပစ်စညျးလှုပ်ရှားမှုများ, အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ, အသက်အရွယ်-related ဆီးချိုရောဂါ, အဝလွန်ခြင်းကနေပျေါပေါကျကြောင်းပြဿနာများနှင့် cardioprotection ၏စီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်နေရာလေးကိုဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။ Nicotinamide Mononucleotide နှင့်ဆက်စပ်သမျှသောဤ pharmacological လှုပ်ရှားမှုများရှိနေသော်လည်းအရှိဆုံးသဲရှာဖွေတွေ့ရှိမှု Anti-အိုမင်းလှုပ်ရှားမှုများအတွက်၎င်း၏ပါဝင်ပတ်သက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်၌, NMN ဆဲလ်အတွင်းစွမ်းအင်၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအသက်အရွယ်အဖြစ်, ဆယ်လူလာစွမ်းအင်ကြောင့် nicotinamide mononucleotide နှင့် NAD + + ၏နောက်ဆက်တွဲလျှော့ချရေး၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်မှလျော့နည်းစေပါသည်။ NMN စီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းစဉ် reverse နှင့်လိုငွေပြမှုများအတွက်လျော်ကြေးပေးမည်ဖြစ်သည်။
(1) ဘယ်လို NMN လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ပါသလဲ
အဲဒီ anti-အိုမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ထဲသို့အူကနေလျှပ်စစ်ကဲ့သို့သွားလာ။ မိနစ်အနည်းငယ်မှာတော့သူတို့ကသွေးကြောသို့တက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်။ ဤအကြောင်းကြောင့်ထိုသို့မော်လီကျူးများ '' လမ်းကြောင်းအတွက်နေရာယူပြီးမဆိုဓာတုဓါမျှမရှိစေအံ့သောငှါရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်လာသည်။
အဆိုပါစိတ်ရှုပ်စေသောမြန်နှုန်းသုတေသီများဆဲလ်လောင်စာပေးပို့နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်သောပို့ဆောင်ရေး, ဖြစ်နိုင်ခြေကောက်ချက်ချဖို့ဖန်ဆင်းတော်မူပြီ။ ဥပမာအားဖြင့်, Imai နှင့်သူ၏အပေါင်းအသင်းဇန်နဝါရီလ 7, 2019 အပေါ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်သည်သူ၏မကြာသေးခင်ကလေ့လာမှုမှတဆင့်အဖြေတစ်ခုကိုရှာဖွေထွက်ထားကြ၏။
အသက်ကြီးနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ကထုတ်လုပ်နိုင်တာထက်ပို NAD + + တက်အသုံးပြုသည်။ သို့သော်အများကြီးသင် nicotinamide mononucleotide အသုံးပြုဖြစ်စဉ်နေဆဲနေသမျှကာလပတ်လုံးယင်း၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကူညီရန်မမော်လီကျူးရဲ့အဖြစ်အချိန်တစ်ခုစွန့်ပစ်ကြလိမ့်မည်။ အိုမင်းပြဿနာများ၏ 90% ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟူသောလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Transporter ပျက်ပြယ်ဖို့ scrolling မထားပါ။
(2) Nicotinamide Mononucleotide ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံဖော်မြူလာ
(3) Nicotinamide Mononucleotide အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Nicotinamide Mononucleotide (NMN) အမှုန့်
အဘယ်သူမျှမ CAS ။ 1094-61-7
မော်လီကျူးအလေးချိန် 334.221 g / mol
သန့်ရှင်းစင်ကြယ် > 98%
သည်အခြားအမည်များ · Nicotinamide-1-ium-1-β-D-ribofuranoside 5'-ဖော့စဖိတ်
· Beta ကို-NMN
· Nicotinamide ribonucleoside 5'-ဖော့စဖိတ်
2. Nicotinamide Mononucleotide နှင့် NAD + +
နှစ်ခုလုံး Nicotinamide Mononucleotide နှင့် NAD + + ဆယ်လူလာလောင်စာဆီဖြန့်ဝေအတွက်သိသာထင်ရှားသော biomarkers ဖြစ်ကြသည်။
NMN Nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide (NAD + +) ၏ biosynthesis တစ်ခုအလယ်အလတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ပစ္စည်းဥစ္စာထိုကဲ့သို့သော nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase, လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် NAD + + သို့ပြောင်းပေးသောအဖြစ်သတ်သတ်မှတ်မှတ်အင်ဇိုင်းတွေတစ်အလွှာအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။ ပျက်စီးခြင်းအပျေါမှာ, ဒီဒြပ်ပေါင်းများ nicotinamide မှပြောင်းလဲစေပါသည်။ နောက်ပိုင်းတွင်ထိုသို့ NMN ဖွဲ့စည်း nicotinamide phosphoribosyltransferase (NAMPT) ပါဝင်သောအခြား catalytic တုံ့ပြန်မှုခြင်းကိုသည်းခံ။
ထိုသူနှစ်ဦးမော်လီကျူးကသူတို့ကိုမဆို၏မရှိခြင်းအခြားအကျိုးသက်ရောက်စေလိမ့်မည်ဟုထိုကဲ့သို့သောဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ NMN ၏အဆင့်ဆင့်ဖြစ်ကောင်းကြောင့် senescence ရန်, အကောင်းဆုံးကိုအောက်တွင်ဆုံးရှုံးခြင်းသို့ရောက်ကြသည့်အခါဥပမာ, ကို ယူ. NAD + + ၏အရေအတွက်နောက်ပိုင်းတွင်ကျဆင်းလိမ့်မယ်။
သငျသညျအသက်အရွယ်အဖြစ်အချို့သော enzymatic လုပ်ဆောင်ချက်များကို NAD + + ခန္ဓာကိုယ်လောင်စာထုတ်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုလောင်လေ့ရှိပါတယ်။ အဆိုပါ sirtuins, NADase နှင့် Poly-လူတွေလည်းရှိနေတယ်-ribose polymerase (PARP) က၎င်း၏ဆုတ်ယုတ်ရန်ဦးဆောင် NAD + + တက်ရှို့သောအင်ဇိုင်းတွေ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
သို့သော်ဆယ်လူလာလောင်စာဆီကျဆင်းမှုကျပန်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဥပမာ, ပျက်စီးနေသော DNA ကို၏ပြုပြင်အတွက် PARP အကူအညီအထောက်အပံ့များပါဝင်သောအဆိုပါ enzymatic တုံ့ပြန်မှုကိုယူပါ။ ဒါ့အပြင် sirtuins ဆယ်လူလာဇီဝြဖစ်တိုးတက်အောင်အတွက်သိသာထင်ရှားသောအခန်းကဏ္ဍကစား။
အဲဒီနှစျခု biomarkers အကြားတစ်ဦး pharmacological ဆက်ဆံရေးမျိုးရှိမယ့်သော်လည်း, သငျသညျကိုတိုက်ရိုက်စနစ်သို့ NAD + + စီမံခန့်ခွဲဘယ်တော့မှနိုင်ပါတယ်။ နည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သလောက်ခုနှစ်, ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး insufferable ဖြစ်လိမ့်မည်။ ဥပမာအားဖြင့်, မြင့်မားထိုးပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်း, စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်း, အိပ်မပျော်ခြင်းဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ ပိုအဘယ်အရာသည်ဒြပ်ပေါင်းမှာပလာစမာအမြှေးပါးမှတဆင့်ဒီထက် permeable ဖြစ်ပါတယ်။
(1) Absorption ၏ယန္တရား
အဆိုပါ Anti-အိုမင်း Nicotinamide Mononucleotide တစ်ဦးပါးစပ်မူးယစ်ဆေးအဖြစ်ရရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါအူအုတ်ရိုးနှင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကသို့၎င်း၏စုပ်ယူမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးသုံးမိနစ်စတင်သည်။ အဆိုပါ 15 အားဖြင့်th ထိုသို့အားလုံးတက်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ကြပါလိမ့်မယ်မိ။ Imai နှင့်သူ၏ Co-သုတေသီများကပြည့်စုံလေ့လာမှုဒီလျင်မြန်စုပ်ယူမှုနှုန်းမှာ accelerates တဲ့ပရိုတိန်းအဲဒီမှာရှိကွောငျး ascertains ။
တစ်သျှူးစဝါးမြိုခြင်းပေါ်၌ NMN အလွယ်တကူအဆင်ပြေသိုလှောင်မှုအတွက် NAD + + သို့ပြောင်းပေးပါတယ်။ အဆိုပါဇီဝြဖစ်ဖြစ်စဉ်ကိုနာရီဝက်အထိကြာနိုင်ပါတယ်။ NAD + + ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအရိုးကြွက်သား, အဖြူရောင် adipose တစ်ရှူး, အသည်း, နှင့် cortex အတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် Nicotinamide Mononucleotide ၏ရေရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအညိုရောင် adipose တစ်ရှူးကဲ့သို့အခြားကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက် NAD + + ၏အဆင့်ကိုအရှိန်မြှင့်။
အဆိုပါနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေဆဲလ်တွေအတွင်းမှာပဲ NAD + + ချို့တဲ့မှုအတွက်လျော်ကြေးပေးအပ်အထိသုံးကွဲပြားခြားနားသောဇီဝဖြစ်စဉ်လမ်းကြောင်းရှိပါတယ်။
① အဆိုပါ De Novo Pathway
de Novo ဆိုလိုတာကတစ်အိပျစကားလုံးက "အစအဦးမှ။ " ဒီမှာကတော့ဘေ့ majorly NMN ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကနေအစပြုရာ, tryptophan သို့မဟုတ်နီကိုတင်းအက်ဆစ်များမှဖြစ်ပါသည်။
ဒီလမ်းကြောင်းမှာထဲကဓာတုပစ်စညျးလှုပ်ရှားမှု၏ sequence ကိုနီကိုတင်းအက်ဆစ် mononucleotide, နီကိုတင်းအက်ဆစ်အက်ဒနင်း dinucleotide နှင့်နောက်ဆုံးတွင်အများကြီးမျှော်လင့် NAD + + ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းစေပါတယ်။ de Novo စုစုပေါင်းဆယ်လူလာလောင်စာဆီနှင့်ပတ်သက်ပြီး 15% ထုတ်လုပ်သည်။
② အဆိုပါဆယ် Pathway
ဤတွင်အဆိုပါလမ်းကြောင်း DNA ကိုဖြိုဖျက်ရှိရာကိစ္စများတွင် nucleosides ပြန်လည်သက်သာ။ ဒါဟာလူ့ခန္ဓာကိုယ်ဆဲလ်လူလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုဘို့လိုအပ်တယ်သောစုစုပေါင်း NAD + + ၏ 80 ကျော်% တွက်သည်။ အဆိုပါလမ်းကြောင်းလတ်ဆတ် NAD + + synthesize မှနီကိုတင်းအက်ဆစ်နှင့် nicotinamide နှစ်ဦးစလုံး reuses ။
နီကိုတင်း phosphoribosyltransferase နီကိုတင်းအက်ဆစ်ကနေနီကိုတင်းအက်ဆစ် mononucleotide ၏ဖွဲ့စည်းခြင်း accelerates ။ နောက်ပိုင်းတွင်, nicotinamide mononucleotide adenylyltransferase 1 နီကိုတင်းအက်ဆစ်အက်ဒနင်း mononucleotide ငှါ၎င်း, နောက်ဆုံးတော့ NAD + + မှထွက်ပေါ်လာတဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ adenylation catalyzes ။
လူ့အပေါ် NMN အလုပ်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုအပေါ်မှီခိုသည်။
Nicotinamide Riboside အခြား NAD + + ရှေ့ပြေးဖြစ်ပါတယ်။ nicotinamide riboside kinase ၏ရှေ့တော်၌ phosphorylation အပေါ်သို့, အ biomarker NAD + + သို့အခြားသော enzymatic ကူးပြောင်းလျှက်မတိုင်မီ NMN ဖြစ်ထွန်း။
သုတေသနအတွက် NAD + + နှင့် NMN ၏သမိုင်း
nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide နှင့်၎င်း၏ရှေ့၏နှစ်တွေလေ့လာမှုနှင့်ကုထုံးအသုံးပြုမှုအပေါငျးတို့သဒေါသဖြစ်ရပြီ။ သို့သျောလညျးသငျသညျဤအကြောင်းသတိပြုပါသင့်တယ် Anti-အိုမင်းဖြည့်စွက် ကျယ်ပြန့်သည့်နှစ်လယ်ပိုင်း 1900s ကတည်းကသုတေသနတွင်ကျင်းပခဲ့ကြသည်။
1906 ခုနှစ်တွင်ပထမဦးဆုံးပညာရှင်များ NAD + + တဆေးထဲမှာအချဉ်ပေါက်မှုနှုန်းအရှိန်ကြောင့်ပေါ်မူတည်ပြီး။ နောက်ပိုင်းတွင်အခြားဇီဝဓာတုပညာရှင်တစ်ဦးဘေ့အဖြစ်ခွဲခြားခြင်းဖြင့်ဝတ်စုံကိုနောက်သို့လိုက်ကြ၏။
1937 ၌သူ၏သုတေသနမှတဆင့်, Conrad Elvehjem nicotinamide နှင့်နီကိုတင်း NAD + + ၏ဗီတာမင်နှင့်ရှေ့ဖြစ်ကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင်သူသည်ဤနှစ်ခုခွေးအတွက် pellagra သက်သာစေနိုင်ကြောင်းနိုင်ကြောင်းထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါအကြောင်းပြချက်နီကိုတင်းအက်ဆစ်နှင့် nicotinamide ၏အဆင့်ဆင့်ရောဂါခံစားနေရပြီးတစ်ဦးချင်းစီအပေါ်အကောင်းဆုံးအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောခဲ့သည်။
1963 ခုနှစ်တွင်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကြွက်အပေါ် Nicotinamide Mononucleotide အလုပ်ဆယ်လူလာ functions တွေတိုးမြှင့်အတွက်သိသာထင်ရှားသောသော DNA ကို-မှီခိုအင်ဇိုင်းတွေ, လှုံ့ဆော်မယ်လို့တည်ထောင်ခဲ့သည်။ နှစ်နှစ်အကြာအချို့သုတေသီများ tryptophan နှင့်နီကိုတင်းအက်ဆစ်ပါဝင်သောအဆိုပါ NAD + + ထဲကဓာတုပစ်စညျးလမ်းကြောင်းလင်းဆောင်ခဲ့လေ၏။
ထိုအချိန်မှစ. ဇီဝဓာတုပညာရှင် NMN နှင့် NAD + + သုတေသနအတွက်အကျိုးစီးပွားဖေါ်ပြခြင်းအပေါ်ဆီးတားလေပြီ။ ဒီခေတ်ထဲမှာ, ဝေဖန်အာရုံသည်ဤများ၏အရေးပါမှုအပေါ်ဖြစ်ပါသည် Anti-အိုမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများ အသက်ရှည်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်-related ပြဿနာများလျော့နည်းသွားစေပါတယ်။
3. ကြွက်တွေကအပေါ် Nicotinamide Mononucleotide လုပ်ငန်းခွင်၏နောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန
Nicotinamide Mononucleotide (1094-61-7) ၏ကုထုံးအကျိုးကျေးဇူးများကိုထုတ်ထမ်းသော murine မော်ဒယ်များအပေါ်မရေမတွက်နိုင်သော preclinical လေ့လာမှုများရှိပါသည်။
(1) Sinclair အဆိုအရ, NAD + + လူငယ်တစ်စမ်းရေတွင်းဖြစ်၏
ဒေါက်တာ Sinclair နဲ့သူ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အိုမင်းနောက်ပြန်ဆုတ်အတွက် nicotinamide mononucleotide နှင့် NAD + + ၏အလားအလာနှင့် ပတ်သက်. သုတေသနပေါင်းများစွာကိုအပိုင်းပိုင်းပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ မိမိအ 2013 လေ့လာမှုအရ, Sinclair နှင့်အဖွဲ့သည်ခြောက်ရက်ပတ်လုံးအဘို့အ NMN ယူပြီး 22 လဟောင်းကြွက်ကြွက်သားစွမ်းရည်, ဇီဝြဖစ်ခြင်း, ခံနိုင်ရည်အပေါ်တိုးတက်မှုပြထွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင်တစ်ဦး 2016 သုတေသနစာတမ်းအတွက်အုပ်စု NMN လေ့ကျင့်ခန်းအဖြစ်အလားတူအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်ဆိုတာအတည်ပြု။ သငျသညျအစား Nicotinamide Mononucleotide ဖြည့်စွက်အသုံးပြုတဲ့အခါအဲဒီအစားနေ့စဉ်ပြေးစက်ပေါ်တွင်ပြေးခြင်းထက်, သင်ဆဲတူညီတဲ့သက်ရောက်မှုကိုခံစားရနိုင်ပါတယ်။
ဒီဟားဗတ် Geneticist အရ, လူ့အပေါ် NMN အလုပ် သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အထက်တန်းလွှာအားကစားသမားအပေါ်သွေးစီးဆင်းမှု ameliorating ကိုဗဟိုပြု။
(2) Mills က NMN အိုမင်းခြင်းဟာကြွက်တွေအတွက်ဇီဝငြင်းဆိုရန်လျော့ချပြောဆိုသော
အဆိုပါ 2016 လေ့လာမှုကိုကိုးကားခုနှစ်, Mills က et al ။ NMN ကုသမှုဟောင်းကြွက်တွေမှာဇီဝကမ္မနှင့် immunological နှစ်ဦးစလုံး function ကိုအတွက်ကျဆင်းမှုတန်ပြန်မယ်လို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီ NMN ဖြည့်စွက်၏အဆုံးမှာ သုတေသနသည်ကြွက်တစ်ဦးခုခံအားဆဲလ်များ၏စကားရပ်ထဲမှာတိုး, Lymphocytes ပြန့်ပွားနှင့် Neutrophils အတွက်ကျုံ့မှတ်ပုံတင်။
ယခင်က 2011 အတွက်, Mills က, Yoshino နှင့် Imai အစားအသောက်များတွင်-သွေးဆောင်ခြင်းနှင့်အသက်အရွယ်-related ဆီးချိုရောဂါ၏ကုသမှုအတွက် NAD + + ၏အခန်းကဏ္ဍကိုအတည်ပြုပေးရန်ကြွက်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ နောကျထပျ 2016 လေ့လာမှုမှာတော့သူ NMN ဖြည့်စွက်အသက်ကြွက်တွေမှာ oxidative စိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်သွေးကြောကမောက်ကမဖြစ်မှုတန်ပြန်မယ်လို့ထူထောင်သောသူသည်အခြားသုတေသီများနှင့်အတူလက်အားဝင်ရောက်ခဲ့သည်။
(3) NMN Murine & Models အတွက်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ (အေဒီ) Combats
2015 ခုနှစ်, Long က et al ။ အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနှင့်အတူကြွက်အပေါ်ဦးနှောက် mitochondrial အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလိုငွေပြမှုအပေါ် NMN ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေး။ အဆိုပါအဖွဲ့သည် NMN ကုသမှု, အနိမ့် OCR (အောက်စီဂျင်စားသုံးမှုနှုန်း) အပါအဝင်, NAD + + falloff အေဒီ၏ etiology ဆက်ဆံဖို့နိုင်ခဲ့သည်နှင့် mitochondria မူမမှန်ကြောင်းမှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
2016 မှာတော့ဝမ်နှင့်သူ၏အပေါင်းအသင်းသည်ဤβ-amyloid (Aβ) oligomer ကနေဖြစ်ပေါ်ရသောမူးယစ်ဆေးဝါးများတိုက်ခိုက်ရေးသိမြင်မှုနှင့်အာရုံကြောချို့ယွင်း, Anti-အိုမင်းကြောင်းနိဂုံးချုပ်, သူတို့ရဲ့သုတေသနပြုထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ဤသည်Aβပရိုတိန်း neurotoxic ဖြစ်ပြီးအေဒီလူနာများ၏ဦးနှောက်ထဲမှာပြားဖွဲ့စည်းရေးအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ဝမ် et al ။ ကြွက်တွေမှာ NMN အုပ်ချုပ်ရေးဖြင့်သိမြင်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးမြှင်, Aβ oligomers တစ်ဦးကျဆင်းခြင်းမှဦးဆောင်သည်ဟုကောက်ချက်ချခဲ့ကြသည်။
တစ်ဦး 2017 လေ့လာမှုအပြီးတွင် Hou နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် NAD + + ဖြည့်စွက်β-amyloid oligomers များ၏ထုတ်လုပ်မှုလျော့နည်းသွားကြောင်း။ ရှာဖွေတွေ့ရှိ တစ်နှစ်အကြာတွင် Yao အဘိဓါန်နဲ့သူ့အဖွဲ့ Nicotinamide Mononucleotide AD-TG murine မော်ဒယ်များအတွက်Aβနှင့် Synaptic ဆုံးရှုံးမှုများစုစည်းနေခြင်းကိုလျော့နည်းစေကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။
(4) NMN နှင့် Cardio-ကာကွယ်မှု
Yamamoto နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များကတစ်ဦး 2014 ထုတ်ဝေအဆိုအရ NMN ischemic ဒဏ်ရာနှင့် reperfusion ဆန့်ကျင်နှလုံးကာကွယ်ပေးသည်။ ဒီလေ့လာမှုမပြုမီ, Yamamoto NAD + + ကြွက်တွေမှာအစားအစာ-သွေးဆောင်အဝလွန်ခြင်း counters ထွက်ရှာတွေ့သည့် 2012 အဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။
2016 ခုနှစ်, De Picciotto et al ။ နှင့်သူ၏အပေါင်းအဘော်ကဇီဝဓာတုပညာရှင်အိုမင်းကြွက်၏သွေးကြောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုအပေါ် NMN ဖြည့်စွက်၏အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုလေ့လာခဲ့ပါတယ်။ ယင်းအခြအနေဖြင့်, nicotinamide mononucleotide သွေးကြောကမောက်ကမဖြစ်မှု, oxidative စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် elastin အတွက်ကျဆင်းခြင်းစကြရအောင်အတွက်ထိရောက်သောဖြစ်သက်သေပြခဲ့သည်။
(5) ရှင်-Ichiro Imai အားဖြင့်ဆဲလ်ဆီ Delivery ၏တစ်ဦးက New လမ်းကြောင်းအပေါ် Discovery
မကြာသေးမီကသုတေသနများတွင် Imai ကဦးဆောင်သိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဆဲလ်သို့ NMN ၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ် Transporter ရှာဖွေတွေ့ရှိခြင်းနှင့်တူညီမှုများပျက်စီး။
ဤသည် NMN ဖြည့်စွက်သုတေသနအတွက်ဇန်နဝါရီလ 2019 အတွက်ပထမဦးဆုံးရရှိနိုင်ခဲ့ သဘာဝတရားဇီဝြဖစ်။ Imai တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ပရိုတင်းဓာတ်, Slc12a8, လျင်မြန်စွာ NAD + + မှ NMN ၏ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ဆဲလ်ထဲသို့ပို့ဆောင်များအတွက်တာဝန်ရှိကြောင်းတည်ထောင်ခဲ့သည်။ ဒါကအင်ဇိုင်းဟောင်းရှေးရှေးအတွက်ထက်ငယ်ရွယ်သို့မဟုတ်ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီအတွက်မြင်သာထင်သာဖြစ်ပါတယ်။
လူအပေါင်းတို့သည် preclinical လေ့လာမှုများအတွက်, သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင်ကြွက်မှသူတို့ကိုစီမံခန့်ခွဲမတိုင်မီရေထဲမှာ nicotinamide mononucleotide အမြောက်အများအမှုန့်၏လူသိအစီအမံပျော်လိမ့်မယ်။
4. Nicotinamide Mononucleotide (NMN) မှအကျိုးကျေးဇူးများ
NMN လူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်မြောက်မြားစွာကုထုံးလုပ်ဆောင်ချက်များကိုနှင့် pharmacological သက်ရောက်မှုရှိပါတယ်။ ထက်နည်းဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမှာတော့သိပ္ပံပညာရှင်များအပေါငျးတို့သ Nicotinamide Mononucleotide အကျိုးကျေးဇူးများကိုလေ့လာဖို့သူတို့ရဲ့အချိန်ကိုအနုပါပြီ အိုမင်းရှင်းပြသောယန္တယားများနှင့်အသက်အရွယ်-related ဝေဒနာတွေအပါအဝငျ။
ရဲ့လူ့မှုစနစ်အတွက်ဝင်း၏အားသာချက်များသို့ delve ကြပါစို့။
(1) ကဆယ်လူလာသက်တမ်း Lengthening
အဆိုပါ 21 စတင်ခြင်းမှတက်st ရာစု, ပညာရှင်များအနေနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ဖြစ်စဉ်ကိုအဖြစ်အိုမင်းကြေညာဖို့လုံလောက်တဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ သို့သော်ဤအယူအဆ၏ဖြတ်တောက်ခြင်း-အစွန်းရှာဖွေတွေ့ရှိမှုမှပျက်ပြယ်ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်လာသည် Anti-အိုမင်းဖြည့်စွက် Nicotinamide Mononucleotide လိုပဲ။
NMN လူ့ဆဲလ်တွေမှာရှိတဲ့သဘာဝအ-ဖြစ်ပေါ်သည်နှင့် NAD + + နှင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်မှု၏ biosynthesis များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ သငျသညျအဟောင်းများကိုကြီးလာတာနဲ့အမျှအဲဒီနှစ်ခုဒြပ်ပေါင်းများပင်စည်ဆဲလ်များဆုတ်ယုတ်ရန်ဦးဆောင်ပျက်ယွင်း။ ကိုသတိရပါအဲဒီအလုပ်လုပ်တဲ့ယူနစ်အစဉ်မပြတ်ပုံတူပွားရန်, ထို့ကြောင့်တစ်ဦးကဆြုံးချွတ်ဆယ်လူလာသက်တမ်းတိုတိုဖြတ်မည်အလုံအလောက်ဆယ်လူလာလောင်စာလိုအပ်ပါတယ်။
NMN တူသောထိရောက်သော Anti-အိုမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများစီမံခန့်ခွဲလုပ်ငန်းစဉ် reverse နှင့်အိုမင်းယန္တရားနှောင့်နှေးပါလိမ့်မယ်။
(2) လူငယ်ဘဝတွင်စိတ်ဆယ်လူလာစွမ်းအင် Levels နဲ့စှဲ
NAD + + ၏ရှေ့ပြေးဖြစ်ခြင်း, NMN ဆဲလ်ရဲ့ mitochondria ရဲ့အကောင်းဆုံးစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်ထိန်းသိမ်းကစားရန်အခန်းကဏ္ဍရှိပါတယ်။ အိုမင်းကိုအလိုအလျောက် NAD + + ၏အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ကျဆင်းမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်။ ရလဒ်အဖြစ်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုခဏအသက်ကြီးရောဂါများများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုဦးဆောင်ဖွင့်ယူလိုက်တယ်။
ထိုကဲ့သို့သောကြွက်သား, သွေးကြော, ကျောက်ကပ်, အသည်း, ဒါမှမဟုတ်ပန်ကရိယအဖြစ်အရေးပါသောအကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွင်းဆယ်လူလာစွမ်းအင်အဆင့်ဆင့်အတွက်တစ်ဦးကတစ်စက်အမြဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်သိမြင်မှုကနျြးမာရေးနှောင့်ယှက်။ ထိုသို့သော ischemia, နှလုံးအခြေအနေများ, ကျောက်ကပ်ပျက်ကွက်, neurodegenerative ရောဂါနှင့်အခြားသူများအဖြစ်ရောဂါများအထိရိုက်ကူးသောဤအကြောင်းပြချက်ပါပဲ။
စုံလင်သောဖြေရှင်းချက်ပြင်ပ NMN ကုသမှုနှင့်အတူခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ Nicotinamide mononucleotide နှင့် NAD + + ဖြည့်စွက်အားဖြင့်ဖြစ်သည်။ ဤ Anti-အိုမင်းမူးယစ်ဆေးဝါးများထို့နောက်တစ်ဦးနုပျိုကြည့်ပေါ်တွင်တင်တံ့သောအိုမင်းဆဲလ်တွေ, အသက်သစ်တစ်ခုငှားရမ်းပေးလေ့ရှိသည်။
အဟောင်းကိုကာလအတွင်းပေါ်ပေါက်သောအပြောင်းအလဲတစ်ခုမှာနို့တိုက်သတ္တဝါငယ်တွေခန္ဓာကိုယ်အတွင်းသွေးကြောများ၏အရည်အသွေးအတွက်ကျဆင်းခြင်းသည်။ ဒါကြောင့်သွေးလည်ပတ်မှုစနစ်ကအာဟာရဓာတ်သယ်ဆောင်သောအခါ, strain တွေအများကြီးခြင်းကိုသည်းခံအောက်စီဂျင်, အပူ, သို့မဟုတ်ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါကနေစွန့်ပစ်မဖယ်ရှား။ အခြေအနေကမလြှော့ဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကကြောင့်နှစ်ရှည်လများရောဂါများ၏ဖြစ်ပျက်မှုမှအဓိကဦးဆောင်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှပိုဆိုးလာရင်။
Nicotinamide Mononucleotide သွယ်ဝိုက်သွေးကြောများ၏ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ ငါ့ကိုရှင်းပြခွင့်ပြုရန်။ အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းများအလှည့်အတွက် sirtuin deacetylase (SIRT1) ပရိုတိန်းမြှင့်လုပ်ဆောင်ပေးသော NAD + + synthesizes ။
ပြောင်းပြန် SIRT1 lysine အောက်စီဂျင်အခမဲ့အစွန်းရောက်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အကူအညီများ residues deacetylates ။ ဤသည်ယန္တရားဖြစ်နိုင်သော oxidative စိတ်ဖိစီးမှု, reperfusion, ဒါမှမဟုတ် ischemic ဒဏ်ရာဆန့်ကျင်တိုက်ဖျက်။ ပုံမှန်ကိစ္စများတွင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုယ်တိုင်က endogenously ischemic ကြိုတင်စည်းကမ်းသတ်မှတ်ချက် (IPC) မှတဆင့် ischemia နှင့်ဆက်စပ်အခြေအနေများတန်ပြန်ပါလိမ့်မယ်။ IPC ထို့နောက် SIRT1 များ၏ထုတ်လုပ်မှုကိုလှုံ့ဆော်ဖို့ပြုမူပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျဖြစ်စေနိုင်ကာ ischemic ဖြစ်ရပ်ဖြစ်ပေါ်သို့မဟုတ်ယင်း၏ပေါ်ထွန်းခြင်းစဉ်အတွင်းမတိုင်မီ NMN စီမံခန့်ခွဲ။ ဖြစ်ပျက်မှုမပြုမီ, ဝင်း glycolysis မှတဆင့် ATP ထုတ်လုပ်မှုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် cardio-ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးပေးထားပါတယ်။
က acidosis ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့် mitochondrial impermeability ဖြစ်ပေါ်စေပါလိမ့်မယ်အဖြစ် Ischemia ၏အမှု၌, သင်ဆဲ Nicotinamide Mononucleotide ကိုသုံးနိုင်သည်; ဤအရပ်မှ, ထိုနှလုံးစနစ်၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအာမခံ။
ထိုအသွေးစီးဆင်းမှုငြင်းပယ်သောအခါအသင်ဘာကိုမျှော်လင့်သလဲ? ကောင်းပြီ, ပြည်နယ်ကြွက်သားထုထည်ဆုံးရှုံးမှုဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသင်အဟောင်းရှေးရှေးလျော့နည်းစွမ်းဆောင်ရည်နိမ့်ခံနိုင်ရည်, ရွေ့နှင့်ဤမျှလောက်ပင်ပန်းသူအပေါင်းတို့ကိုအချိန်ရှိသည်သတိထားမိပါလိမ့်မယ်အဘယ်သူမျှမသံသယပါပဲ။
ဒေါက်တာ Sinclair အားဖြင့်သဲရှာဖွေတွေ့ရှိတစ်ခုမှာကြွက်သားအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးမြှင့်အတွက် NMN ၏ထိရောက်မှုအပေါ်ဗဟိုပြုခဲ့ပါတယ်။ မိမိအ 2013 နှင့်မကြာသေးမီက 2018 လေ့လာမှုများအရတစ်ခုနစ်ခုရက်ကြာ NMN ကုသမှုထိတွေ့ဟောင်းကြွက်သူတို့၏နုပျို counterparts တွေကိုတူသောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြံ့ခိုင်မှုနှင့်တက်ကြွဖြစ်လာခဲ့သည်။
အဆိုပါကြွက်သားစွမ်းရည်နှင့်ရှေးအကျဆုံးကြွက် (30-လအရွယ်) ၏ခံနိုင်ရည်ငါးလအရွယ် youngling မြားကဲ့သို့တူညီသောခဲ့ကြသည်။ ဤရွေ့ကားအသက်အရွယ်လူသားတွေအတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 70 နှင့် 20 နှစ်ပေါင်းအတူနှိုင်းယှဉ်ဖြစ်ကြသည်။ တွေ့ရှိချက်ကနေ, သင် NMN လူ့အပေါ်အလုပ်လုပ်သောအခြနိုင်ပါတယ် သေခြင်းနှင့်အမျှသေချာသည်။
(5) Neurodegenerative Disorders တိုက်ဖျက်ရေး
ဦးနှောက်ကပိုသင့် system တစ်ခုအင်အားကြီးကဲ့သို့ဖြစ်၏။ ဤကဏ်ဍ၏သေခြင်းအချိန်ကြေညာတဲ့အခါမှာအကြံအဥာဏ်အမြဲဦးနှောက်လုပ်ငန်းဆောင်တာအပေါ်အားကိုးကြလိမ့်မည်ရတဲ့အကြောင်းရင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။
ဦးနှောက်ထဲမှာ NAD + + ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်တစ်ဦးကလျှော့ချရေးသက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားသိမြင်မှုကနျြးမာရေးနှောင့်ယှက်။ NMN ၏အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အာရုံကြောလုပ်ဆောင်ချက်များကိုကာကွယ်ဤအရပ်, NAD + + ထုတ်လုပ်မှု accelerates ။
လေ့လာမှုများ၏ရမှတ်များ Nicotinamide Mononucleotide အကျိုးပြုကြောင်းသက်သေပြ သိမှတ်ခံစားမှု, လေဖြတ်ခြင်းနှင့်အသက်ကြီးနှင့်အတူပျံ့နှံ့နေတဲ့ဖြစ်သောမှတ်ဥာဏ်ဆုံးရှုံးမှု, impedes ။ အကျဉ်းနည်း, ဒီ Anti-အိုမင်းဖြည့်စွက်အာရုံခံများ၏ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်တာဝန်ရှိသည်။
NMN အဓိကအားဖြင့်မဆိုပေးထားအာရုံကြောခွအေနအေ၏ etiology ပစ်မှတ်ထား။ ဥပမာ, အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါ NAD + + ဦးနှောက်ထဲမှာအောက်စီဂျင်စားသုံးမှု၏အနိမ့်မှုနှုန်းနှင့် mitochondrial မူမမှန်အတွက်ကျဆင်းခြင်းကြောင့်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤအရာအလုံးစုံသက်ရောက်မှုခန္ဓာကိုယ်ကောင်တာများတွင် NMN ပမာဏကိုတိုးမြှင့။
2012 ထုတ်ဝေလေ့လာမှုတစ်ခုအရ, Nicotinamide Mononucleotide ထိရောက်စွာမကြာခဏလေဖြတ်ဖို့ပို့ဆောင်ပေးသော intracerebral ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု, စီမံခန့်ခွဲပါလိမ့်မယ်။ NMN သောက်သုံးသောအောက်မှာ ရှိ. အဘယ်သူသည်ဟောငျးကြွက်တွေဟာ intracerebral NAD + + ထုတ်လုပ်မှုသိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုမှတ်ပုံတင်။ ဤသုတေသနမော်ဒယ်များ ischemic လေဖြတ်ခြင်း, အာရုံကြောသေခြင်းနှင့်အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်းဆန့်ကျင်အများဆုံးကာကွယ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်။
အတော်ကြာသုတေသီများလေ့လာဆင်းရဲသားအစားအစာတွေနဲ့ကြွက်အိုမင်းအပေါ်သကြားရဲ့ဇီဝြဖစ်တိုးမြှင့်နေချိန်တွင် NMN ဂလူးကို့စသည်းခံစိတ်နိုင်အောင်စီစဉ်ပေးထားတယ်ကြောင်းထင်ရှားပြကြပြီ။ ဒီလေ့လာမှုကလည်းဖြစ်စေမြင့်မားတဲ့သကြားသို့မဟုတ်ဆင်းရဲသားကိုအစာအာဟာရ၏ရလဒ်အဖြစ်ဆီးချိုရောဂါဖွံ့ဖြိုးသောသူအသက်လူသားလျှောက်လွှာတင်ခဲ့တယ်။ ထို့အပြင်အင်ဆူလင်ကိုခုခံဖို့အဆီဆောင်ကြွယ်ဝတဲ့အစားအစာ။
Nicotinamide Mononucleotide NAD + + ၏အထွတ်အထိပ်ထုတ်လုပ်မှုကိုထိန်းသိမ်းထား, အရာဖက်တီးကိုယ်တွင်းအင်္ဂါထဲမှာအင်ဆူလင်၏ activation တိုးတက်အောင်စဉ်အလှည့်အတွက်အသက်-related ရောင်ရမ်းလျော့နည်းစေသည်။
အမျိုးအစား II ကိုဆီးချိုနှင့်အတူပြည်သူ့အမြဲအင်ဆူလင်ခံနိုင်ရည်ပြ။ ဒါဟာဝိသေသ NAD + + အတွက် falloff ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ရလဒ်အနေနဲ့ဆဲလ် oxidative စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ရောင်ရမ်းခြင်းကိုခံယူ။ သင်ဆဲငယ်ရွယ်ဆိုလျှင်ခန္ဓာကိုယ်တချို့ endogenous ဇီဝကမ္မလှုပ်ရှားမှုများမှတဆင့်သူ့ဟာသူနုပျိုပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်အသက်ကြီးအတူ NAD + + အဆင့်ဆင့်, အအရိုးကြွက်သားများကဲ့သို့ဘဝ-ထောက်ပံ့ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက်အသည်း, ဦးနှောက်နှင့်ပန်ကရိယလျော့ကျသွားသည်။
အသက်အရွယ်-related ဆီးချိုရောဂါမှနောက်ထပ်ပံ့ပိုးအချက်တစ်ဦးက high-အဆီဓာတ်စာဖြစ်ပါတယ်။ ပြည့်နှက်ဆီ၏ပုံမှန်မဟုတ်သောပမာဏ NAD + + ၏ biosynthesis တားစီး။ အသက်အရွယ်နှင့်အစားအစာ-သွေးဆောင်ဆီးချိုရောဂါ၏ကုသမှုအတွက် Nicotinamide Mononucleotide များ၏ထိရောက်မှုသက်သေပြမယ့်လေလံမှာတော့ Yoshino နှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်နှစ်ဦးကိုကြွက်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
10 ရက်နီးကပ်များအတွက် NMN ၏နေ့စဉ်ဆေးထိုးစီမံခန့်ခွဲပြီးနောက်, ပညာရှင်များတိုးတက်လာသောအင်ဆူလင်သည်းမခံမှတျတမျးတငျထား, High-အဆီအစားအစာများအကြောင်းမဲ့ခဲ့ကြသည်သောကြွက်, ထိုတည်ထောင်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်ဆီးချိုကြွက် hyperlipidemia အတွက်သိသာထင်ရှားသောတိုးတက်မှုပြသခဲ့သည်။
နာတာရှည်ကျန်းမာရေးပြဿနာများအမြဲအိုမင်းခြင်းဖြစ်စဉ်နှင့်အတူလိုက်ပါ။ ခန္ဓာကိုယ်အများအပြားဇီဝကမ္မအပြောင်းအလဲများခြင်းကိုသည်းခံသကဲ့သို့, ဆယ်လူလာလုပ်ဆောင်ချက်များကိုအချို့ကိုပြန်လဲဖြစ်ပျက်။ ဆဲလ်ရဲ့ mitochondrion အားဖြင့်စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်နိုင်ရေးအတွက်တစ်ဦးကျဆင်းရန်ဦးဆောင်ဥပမာ, မျိုးစုံကိုယ်တွင်းအင်္ဂါအတွက် nicotinamide အက်ဒနင်း dinucleotide လျှောက်လျော့နည်း၏အဆင့်ဆင့်ကိုယူပါ။
ကြောင့် uncharged မော်လီကျူးများ, သွေးကြော oxidative စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အခြားမှတ်ဉာဏ်ချို့ယွင်းဖို့ထိုကဲ့သို့သော DNA ကို၏ထိခိုက်အဖြစ်ရွေ့လျားမှုအမျိုးမျိုးသောအကြောင်းအချက်များအတွက်အစုံအိုမင်း။ သငျသညျဖွစျသှားသလဲသိလား ကောင်းပြီ, လူ့စနစ်ကတစ်ဦးရဲ့ DNA-ပြုပြင်ပရိုတိန်း (PARP1) ရှိပါတယ်။ DNA ကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှု၏ဖြစ်ရပ်အတွက်, NAD + + ဘေးဒဏ်သင့်ဆဲလ်ပြုပြင်ဒီပရိုတိန်းကိုသက်ဝင်ပါလိမ့်မယ်။
အများအပြားကလေ့လာမှုများ nicotinamide mononucleotide အကျိုးကျေးဇူးများကိုအတူတက်လာကြပြီ အိုမင်း၌တည်၏။ ဥပမာ, Mills ကနှင့်သူ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက် NMN အသက်အရွယ်-သွေးဆောင်ဇီဝကမ္မကျဆင်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ကြွက်မော်ဒယ်များကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
လေ့လာမှုမှာသုတေသီတွေကကုသမှု၏ရေရှည်အုပ်ချုပ်ရေးအသည်း, အရိုးကြွက်သားများနှင့် adipose တစ်ရှူးအတွင်းခိုးယူမျိုးဗီဇ၏ upregulation မှဦးဆောင်သည်ဟုမှတ်ချက်ချသည်။ ပိုကဘာလဲ, တွေ့ရှိချက်ကိုယ်ခံစွမ်းအားဆဲလ်စကားရပ်တစ်ခုတိုးတက်မှု, Lymphocytes တစ်ခုတိုးလာသဖြင့်, leukocytes ၏ activation အတည်ပြုပြောကြားခဲ့သည်။
အိုမင်း၏နောက်ထပ်လက္ခဏာမျက်စိ fundus အတွက် Light-အရောင်အစက်အပြောက်၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအခွအေနအေအတူတကွအရိုးသိပ်သည်းဆတွေပျက်စီးမှုနှင့်မျက်ရည်ကြွက်အပေါ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်လေ့လာခဲ့ကြပြီထုတ်လုပ်နိုင်ရန်နိုင်စွမ်းမရှိခြင်းနှင့်အတူ။ သိပ္ပံပညာရှင်များသည်တစ်ဦး 12 လ NMN ကုသမှုပေါ်တွင်တင်ခဲ့ကြသည်ထားတဲ့ကြွက်, ပြောင်းပြန်အားလုံးအထက်ပါအခြေအနေများရှိခဲ့ကြောင်းလေ့လာသည်။
အသက်ရှည်အဘယ်ကြောင့်လူပေါင်းတစ်ဦးတည်းသောအကြောင်းပြချက်ဖြစ်ပါတယ် Nicotinamide Mononucleotide ဝယ်ဖို့.
သက်ကြီးရွယ်အိုများအဘို့, NMN အစာစားချင်စိတ်များနှင့်တိုးတက်မှုနှုန်းအကြားအလယ်မြေပြင်ကိုရှာဖွေမတွေ့ရှိဘဲကနဦးခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်၏% 10 အထိလျှော့ချနိုင်ပါတယ်။ အဝလွန်ခြင်းနှင့်ဆီးချိုရောဂါ၏ရောဂါဗေဒယန္တရားဆက်နွယ်နေကြောင်းနေကြသည်။ အနိမျ့ NAD + + အဆင့်ဆင့် mitochondrial ကမောက်ကမဖြစ်မှုအကြောင်းကိုငါဆောင်ခဲ့မည် ဤအရပ်မှ, ATP များ၏ထုတ်လုပ်မှုလျော့ကျ။
အဝလွန်ခြင်းဆဲလ်များအတွက် ATP စွမ်းအင်ထုတ်လုပ်အတွက် mitochondria တွေရဲ့အလားအလာကဆင်းအလေးချိန်။ သငျသညျ Nicotinamide Mononucleotide စီမံခန့်ခွဲပြီးတာနဲ့မူးယစ်ဆေးဂလူးကို့စသည်းမခံခြင်းနှင့်အဝလွန်ခြင်းနှင့်စပ်လျဉ်းသည်အခြားဇီဝဖြစ်စဉ်လုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်စေပါလိမ့်မယ်။
ကသွေးစီးဆင်းမှုပိုကောင်းရန်ကြွလာသောအခါ, အဝလွန်ကုသမှုများအတွက် NMN ကျင့်သုံးမှအလားတူပြုမူ။ တစ်ဦးကတစ်ခုတည်းဆေးလုံးနေ့စဉ်ပြေးစက်ကို အသုံးပြု. ကဲ့သို့ကောင်းသောလိမ့်မည်။ သို့သော်ခြားနားချက်ကိုခန္ဓာကိုယ်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းအတွက် NAD + + အကြောင်းအရာများ၏အဆင့်ဆင့်အတွက်လာပါတယ်။ Nicotinamide Mononucleotide အသည်းနှင့်ကြွက်သားတစ်သျှူးနှစ်ဦးစလုံးအတွက် NAD + + တိုးပွါးသော်လည်း, လေ့ကျင့်ခန်းကိုသာကြွက်သားအတွင်းဒြပ်ပေါင်းများကိုတက်ဆော။
5. Nicotinamide Mononucleotide (NMN) တကယ်လူ့တွင်အလုပ်လုပ်ပါသလား
ကောင်းပြီ, ဒီကသင်၏ဦးခေါင်း၌အူလက်ရှိမေးခွန်းတစ်ခုကိုဖြစ်လိမ့်မယ်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်ခုနှစ်, Nicotinamide mononucleotide နှင့် NAD + + ပေါ်တွင်ဗဟိုပြုအပေါငျးတို့သသုတေသနနှင့် Preclinical လေ့လာမှုများ murine မော်ဒယ်များပစ်မှတ်ထားပြီ။
သငျသညျလူ့အပေါ် NMN အလုပ်၏ထိရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. သံသယရှိသည်ဆိုလျှင်, ဒီမှာသင်သိထားရန်လိုအပ်သမျှရဲ့။ ဒေါက်တာဒေးဗစ် Sinclair, ထိပ်တန်းသုတေသီနှင့်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်မှ geneticist NMN ၏လက်ခံသူများတစ်ခုဖြစ်သည်။
Sinclair သူဖြည့်စွက်ကြာကိုဝန်ခံ။ ဒီတော့ဝေး, အပညာရှင်မဆိုသင်ျခြိုငျး nicotinamide mononucleotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးမှတျတမျးတငျထားမထားပါဘူး။ ဆန့်ကျင်တွင်သူသည်သူတစ်ဦးချွန်ထက်သောစိတ်ဖြင့်ငယ်ရွယ်ခံစားရကြောင်းကျင့်။ Hangover နှင့်ဂျက်နှေးယခုသူ့ကိုမှတင်းမာနေတဲ့အတိတ်ဖြစ်ကြသည်။ သူကနောက်ထပ်မိမိအနှောင်းပိုင်းတွင်မတွေ့ရသေးတဲ့အတွက်သူသည်မိမိအဘ, ကိုလည်းဖြည့်စွက်ကြာပြောဆိုသော။
ထို့အပြင်ဒေါက်တာ Sinclair ဟာဘရစ်ဂ်ဟမ်နှင့်အမျိုးသမီးဆေးရုံမှာအစောပိုင်းစမ်းသပ်မှုအဖြစ်ကုသမှုကိုအသုံးပြုထားသည်။ သူကနောက်ထပ်ကျန်းကျန်းမာမာသက်ကြီးရွယ်အိုများရှေးရှေးအပေါ်ဖြည့်စွက်စမ်းသပ်ဘို့အစီအစဉ်တွေရှိနေပါတယ်။ မိမိအအဆင့်တဦးတည်းလေ့လာမှုပြည့်စုံပေမဲ့သူကတာဝန်ရှိသူတစ်ဦးကထုတ်ဝေလုပ်သေးသည်။ Sinclair ကဤလက်တွေ့၏ဒုတိယအဆင့်တွင်စတင်ခဲ့ပြီး NMN ဖြည့်စွက် သုတေသနလုပ်ငန်း 2018 ၌တည်၏။
1 အပေါ်မှုကြောင့်သောလက်တွေ့လေ့လာမှုထဲမှာst ဇွန်လ 2020, သုတေသီများလူသားတွေအတွက် NMN ဖြည့်စွက်အတူ sensitivity ကိုအတွက်အပြောင်းအလဲနှင့် beta ကို-ဆဲလ်လုပ်ငန်းဆောင်တာတည်ထောင်ရန်မျှော်လင့်နေကြတာပါ။ အဆိုပါပညာရှင်များအတွက်ဆေးပညာဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းနှင့်တိုကျိုမြို့ရှိဆေးပညာ Keio University မှ School မှဖြစ်ကြသည်။
Keio University က 2016 အတွက်ချွတ်ကန်မယ့်လူ့ရုံးတင်စစ်ဆေးမှာပညာရှင်များကျန်းမာလူကြီးများအတွက် NMN များ၏ဘေးကင်းလုံခြုံမှုအကဲဖြတ်ရန်ရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။ လက်ရှိဒုတိယအဆင့်မှာတော့ရှင်-Ichiro ကဦးဆောင်တူညီတဲ့အဖွဲ့အစည်း, ရေရှည် NMN အုပ်ချုပ်ရေးစုံစမ်းစစ်ဆေးနေပါတယ်။ ပိုပြီးင်ကဘာလဲ, ထိုအဖွဲ့သည်ဇီဝဖြစ်စဉ်-syndrome ရောဂါ-related parameters တွေကို, NMN kinetics အကဲဖြတ်ဖို့ရှာကြံနှင့်ဂလူးကို့စဇီဝြဖစ်ပေါ်မူးယစ်ဆေးရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
ဝါရှင်တန်တက္ကသိုလ်အားဖြင့် 2017 လက်တွေ့လေ့လာမှုထဲမှာ, သင်တန်းသားများကို 50 အမျိုးသမီးတွေနှစ်ပေါင်း 55 မှအသက် 75 ပါဝင်သည်။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်ရှစ်ပတ်ကြာ NMN ၏ 250mg ၏နေ့စဉ်သောက်သုံးသောပေါ်တွင်တင်ခံခဲ့ရသည်။ သူတို့ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီကြပေမဲ့အဲဒီအမျိုးသမီးတွေအနည်းငယ်သောအသွေးကိုဂလူးကို့စ, triglyceride နှင့် BMI မြင့်မားခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလေ့လာမှုသေးပြီးပြည့်စုံသည်မဟုတ်။
ယခုကဲ့သို့လူ့အပေါ် NMN အလုပ် corroborate မစာပမြေားရှိပါတယ်။ တစ်ခုခုချက်ပြုတ်နေသည်နှင့်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေအလားအလာဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်သင်တို့အပေါ်မှာဆွဲထားသင့်ပါတယ်။
6. Anti-အိုသည် Nicotinamide Mononucleotide (NMN) ကိုသုံးပါရန်ဘယ်လိုနေသလဲ?
သငျသညျ nicotinamide mononucleotide ကိုဝယ်ခြင်းငှါရှာကြသည်ဆိုပါက, သင်သိထားရန်လိုအပ်ပါတယ်အနည်းငယ်သောအရာတို့ကိုရှိပါသည်။
ကသေးနေတဲ့ဆေးညွှန်းမူးယစ်ဆေးဖြစ်တစ်တွေနောက်ဆုံးနှုတ်ဆက်ခြင်း FDA ကထောက်ခံချက်လက်ခံရရှိခြင်းမရှိသေးပါခင်ဗျားကတည်းကသင်သာတစ်ဦးဓါတ်ဖြည့်စွက်အဖြစ်ကုသမှုယူနိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါသောက်သုံးသောသင်အောင်မြင်ချင်သောကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုပေါ် မူတည်. 25mg နှင့် 300mg အကြားနေကြပါတယ်။ သို့သော်အချို့လူတွေတစ်နေ့လျှင် 1000mg မှတက်တာဝန်ခံ။ ဥပမာအားဖြင့်, ဒေါက်တာ Sinclair 750mg / နေ့ကြာ, ယူပါ။ အပြင်သူ Resveratrol နှင့် Metformin ဆေးဟာလည်းနှင့်အတူဤစစ်အစိုးရ supplements ။
NMN လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေမှာတော့အများဆုံးသုတေသီများ 100mg မှ 250mg တစ်ထိုးအကွာအဝေးမှာမိမိတို့ဘာသာရပ်များထားလိမ့်မယ်။
Sublingual vs. ပါးစပ်
သင်ဤဖြည့်စွက်၏ bioavailability တိုးမြှင့်ဖို့လိုလျှင်, သင် sublingual အုပ်ချုပ်မှုများအတွက် Nicotinamide Mononucleotide တက်ဘလက်ကိုဝယ်သင့်ပါတယ်။ မူးယစ်ဆေးယူပြီးနှုတ်တစ်သျှူးသို့စုပ်ယူပမာဏကိုလျော့ကျစေပါတယ်။ အကြောင်းပြချက်ကစာခြေလမ်းကြောင်းနှင့်အသည်းဖြတ်သန်းအဖြစ်ကဇီဝြဖစ်ခြင်းနှင့်ပျက်စီးခြင်းခြင်းကိုသည်းခံသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
Sublingual NMN တိုက်ရိုက်မဆို filtrations မရှိဘဲသွေးကြောထဲသို့ဝင်။ ဖြန့်ဝေ၏ဒီနည်းလမ်းရဲ့စုပ်ယူမှုနှုန်းမှာပါးစပ်အုပ်ချုပ်မှုထက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်ငါးဆပိုသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင်အသည်းအတွင်းပထမဆုံး Pass နှင့်ဇီဝြဖစ်တက်သည်ဖြစ်စေခြင်းငှါသောက်သုံးသောတိုးမြှင့်ဖို့ရပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျသုတေသနလုပ်နေခဲ့ကြသည်စိတ်ထင်, သင်လေ့လာမှုပြီးစီးရန်သင်တို့အဘို့ nicotinamide mononucleotide အမြောက်အများအမှုန့်ထားဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
7. သင်သိသင့်သ Nicotinamide Mononucleotide ၏ဘေးထွက်
ပုံမှန် niacinamide နှင့်အခြားဗီတာမင် B3 compoundnicotinamide mononucleotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး s မှပြသူတို့နှင့်အတူပြောရလျှင်ဖြစ်ကြသည်။ သို့သော်လူအများစုပင်မှာအားလုံးသူတို့ကိုတွေ့ကြုံခံစားကြဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်, ထိပ်ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်သုတေသနသိပ္ပံပညာရှင် NMN တာဝန်ခံသည်, ဒါပေမယ့်သူမဆိုခေါက်-အပေါ်သက်ရောက်မှုကိုသတိပြုမိခြင်းမရှိသေးပေ။
ဒါကြောင့်ယခုအချိန်အထိကြွက်ပေါ်မှာရှိသမျှရရှိနိုင်ပါသည် Nicotinamide Mononucleotide အလုပ်အတွက်, အဘယ်သူမျှမဒေတာ murine မော်ဒယ်များအတွက်မဆိုဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ၏တည်ရှိမှုကိုပြသထားတယ်။ အဘယ်သူမျှမသုတေသီနှစ်ဦးစလုံးရေတိုနှင့်ရေရှည် NMN အုပ်ချုပ်ရေးအတွက်အနုတ်လက္ခဏာလက္ခဏာမှတ်တမ်းတင်ထားသောသိရသည်။
အချို့လူများကအောက်ပါအနုတ်လက္ခဏာ upshots စောငျ့ရှောကျစခွေငျးငှါ,
ထိုကဲ့သို့သောယားယံခြင်း, အသင်းအဖွဲ့ချုပ်, ဒါမှမဟုတ်အဖုအဖြစ်မတည့်တုံ့ပြန်မှု
ရှားပါးကိစ္စများတွင် nicotinamide mononucleotide ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးကိုသင်ချက်ချင်းကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများ-up, ရှာပါတယ်သောအတိုင်းအတာအထိပြင်းထန်စေနိုင်ပါတယ်။ အနည်းငယ်, အခက်အခဲများအသက်ရှူခြင်း, မမှန်နှလုံးခုန်, မြဲအန်, အဝါရောင်အသားအရေဖော်ပြထားခြင်းနှင့်အစာစားချင်စိတ်ဆုံးရှုံးလူတန်းစားရောဂါလက္ခဏာတွေအကြားရှိပါတယ်။ ရန်
ဒီပွိုင့်ရန်, လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေသာ 45 နှစ် 75 များ၏အသက်အရွယ် bracket ကအတွက်ကျန်းမာလူကြီးများအပေါ်ဗဟိုပြုပါပြီ။ ဤအကြောင်းကြောင့်အောက်ပါအဖွဲ့များ NMN Anti-အိုမင်းဖြည့်စွက်စီမံခန့်ခွဲမတိုင်မီသတိထားရပါမည်။
NMN မှ hypersensitivity တစ်သမိုင်းနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ
8. ဘယ်မှာငါဆန့်ကျင်အိုမင်းခြင်းဟာမူးယစ်ဆေးဝါး-Nicotinamide Mononucleotide (NMN) Find နိုင်သလား?
(1) NMN စားနပ်ရိက္ခာသတင်းရပ်ကွက်များ
သငျသညျဖြစ်ကောင်းသင်အလွယ်တကူအချို့သောအစားအစာများထဲမှာရှာတှေ့နိုငျသောအခါအသငျသညျ Nicotinamide Mononucleotide ကိုဝယ်သင့်ပါတယ်ဘာကြောင့်တစ်ဦးပျော့သွားတာကိုအောင်ပါတယ်။ ဒီဖြည့်စွက်လိုအပ်သောသည်အဘယ်ကြောင့်ငါ့ကိုခေတ္တမျှရှင်းပြပါရစေ။
NAD + + ကြောင့်အိုမင်းမှခန္ဓာကိုယ်အတွက်ငြင်းပယ်သကဲ့သို့, ဆဲလ်အကျိုးသက်ရောက်မှုတန်ပြန်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်။ ဤအချက်မှာ, သင့်သာရွေးချယ် NMN ဖြည့်စွက်အသုံးပြုပေလိမ့်မည်။ Clinician ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း, မှို, edamame, ဒါမှမဟုတ်ပုစွန်ကဲ့သို့အ NMN ကြွယ်ဝသောအစားအစာများကိုယူရန်သင့်အားအားပေးပါလိမ့်မယ်။ သို့သော်ဤအစားအစာမှသာသင့်ခန္ဓာကိုယ်လိုအပ်ပါတယ်အရာကိုထက်နည်း 5% ထွက်ကိုငါပေးမည်။
FDA ကမဆိုလူ့ဖြစ်လျက်ရှိတစ်နေ့လျှင် NMN ၏ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 560mg လိုအပ်နေသည်ဟုအကြံပြုသည်။ သငျသညျပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းကနေဖြည့်စွက်ရဖို့ရှိပါတယ်စိတ်ထင်သငျသညျတူညီသော၏ 1500 ပေါင်ကျော်လောင်မှရပါလိမ့်မယ်။
(2) NMN ဖြည့်
အဆိုပါ nicotinamide mononucleotide အမြောက်အများအမှုန့် အများဆုံးဆေးဝါးနှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစတိုးဆိုင်များသို့မဟုတ်ဓါတ်ခွဲခန်းရှိရောင်းချမည့်ရရှိနိုင်ပါသည်။ သင်သည်သင်၏သုတေသနအတွက်အချို့သောချင်လျှင်, သင်ရေကြောင်းစွဲချက်အပေါ်လျှော့စျေးနှင့်စွန့်လွှတ်နှင့်တကွကြွလာတော်မူသောတစ်ဦးအမြောက်အများအလို့ငှာ, စေနိုင်သည်။
NMN ၏အွန်လိုင်းဝယ်ယူမှု Making သင်၏အချိန်ပေါ်ကယ်တင်ဒါပေမယ့်လည်းကွဲပြားခြားနားသောစျေးနှုန်းများနှင့်နှိုင်းယှဉ်မှုအတွက်အကောင်းဆုံးပလက်ဖောင်းကမ်းလှမ်းမသာ။ သင်တစ်ဦးသုတေသီမဟုတ်ခဲ့လျှင်, သင်ဆဲ Nicotinamide Mononucleotide ဝယ်နိုင် ဖြည့်စွက် ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်။ အမိန့်မချခင်ကအစားအသောက်တန်းထုတ်ကုန်သေချာပါစေ။
ဒါဟာ NMN လူသား၏သကျတမျးရှည်ကြောင်းအခိုင်အမာမှယုတ္တိမတန်အသံ။ သို့သော်ဤအခိုင်အမာဖွင့်ရရှိထားသူဖြစ်ပါသည်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအကြားသေမင်း၏အကြောင်းရင်းကြောင့်ဆင်းရဲသားကိုဆယ်လူလာလုပ်ဆောင်ချက်များကို၏ရလဒ်အဖြစ်အကြောင်းကိုလာသည့်အသက်အရွယ်-သွေးဆောင်ရောဂါများရန်ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Anti-အိုမင်း Nicotinamide Mononucleotide သာဆယ်လူလာလောင်စာပေးပို့တိုးတက်ကောင်းမွန်စေရန်နှင့်ဆဲလ်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်လုပ်ပါ။ ဒါဟာကျနော်တို့အသက်အရွယ်အဖြစ်ကျဆင်းလေ့အရာ, NAD + + upregulating အားဖြင့်ဆောင်ရွက်သည်။
Anti-အိုမင်းမျက်နှာလိမ်းဆေး, moisturizers အရေပြားစို, နေရောင်ကာကွယ်ဆေး, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးကျန်းမာသောအစားအစာအပေါ်ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်းအပေါ်စတင်အသုံးပြုခြင်းသာသင်၏မျက်နှာကိုပြောင်းလဲသွားပေလိမ့်မည်။ သို့သျောလညျးသငျသညျတစ်ဦးချင်းသူတို့နှင့်အတူကိုင်တွယ်ရန်ပြဿနာများအိုမင်း၏အမြစ်အကြောင်းမရှိနားလည်ရန်လိုအပ်သည်။ Nicotinamide mononucleotide, ဦးနှောက်ကာကွယ်, နှလုံးစနစ်ကပျက်စီးသွားသော DNA ကိုပြုပြင်ကြွက်သားလုပ်ဆောင်ချက်များကိုတိုးတက်အောင်နှင့်ခံနိုင်ရည်မြှင့်တင်အားဖြင့်အိုမင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုနောက်ကြောင်းပြန်။
သငျသညျ nicotinamide mononucleotide အမြောက်အများအမှုန့်ချင်တယ်ဆိုရင်, ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူအတွက်စစ်ဆေးဖော်ရွေစျေးနှုန်းများပျော်မွေ့။
Mills က, KF, Yoshino, ဂျေ, Yoshida, အက်စ်, et al ။ (2016) ။ Nicotinamide Mononucleotide ၏ Long-Term အုပ်ချုပ်ရေးကြွက်တွေအတွက်ခေတ်-Associated ဇီဝငြင်းဆိုရန်များအားလျော့ပါးသက်သာစေ။ cell ဇီဝြဖစ်။
Yoshino, ဂျေ, Mills က, KF, Imai, SI နှင့် Yoon, MJ (2011) ။ Nicotinamide Mononucleotide တစ် key ကို NAD + + အလယ်အလတ်, ကြွက်တွေအတွက် Diet- ၏ Pathophysiology နှင့်အသက်အရွယ်-သွေးဆောင်ဆီးချိုရောဂါဆကျဆံတယျ။ cell ဇီဝြဖစ်။
Yamamoto, တီ, Byun, ဂျေ, Zhai P. , Ikeda, Y. , Oka, အက်စ်နှင့် Sadoshima, ဂျေ (2014) ။ Nicotinamide Mononucleotide, NAD + + Synthesis တစ်ခုအလယ်အလတ်, Ischemia နှင့် Reperfusion ကနေနှလုံးကအကာအကွယ်ပေးတယ်။
Sinclair, DA, Uddin, GM က, Youngson, NA နှင့်မောရစ်, MJ (2016) ။ NAD + + ရှေ့ပြေး Nicotinamide Mononucleotide (NMN) နှင့်အဝလွန်အမျိုးသမီးကြွက်တွေအတွက်လေ့ကျင့်ခန်းခြောက်သီတင်းပါတ်နှင့်အတူက Short-Term ကုသမှု၏ဦးခေါင်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့ဦးခေါင်း။
Imai, အက်စ်, Yoshino, ဂျေ, Mills က, KF, Grozio, အေ, et al ။ (2019) Slc12a8 တစ် Nicotinamide Mononucleotide Transporter ဖြစ်ပါတယ်။ သဘာဝတရားဇီဝြဖစ်။
de Picciotto, NE Mills က, KF, Imai, အက်စ်, Gano, LB, et al ။ (2016) ။ Nicotinamide Mononucleotide အိုမင်းခြင်းဟာကြွက်တွေနဲ့အတူသွေးကြောဆိုင်ရာအလုပ်မဖြစ်နှင့် oxide စိတ်ဖိစီးမှုနောက်ကြောင်းပြန်။
Yao အဘိဓါန်, Z. , Gao, Z. ယန်, ဒဗလျူ, နဲ့ Jia, P. (2017) ။ Nicotinamide Mononucleotide အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါနောက်ပြန်မှ jnk Activation ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်။
Hou, Y. , ဝမ်, Y. , Zhang က, Y. , Lautrup, အက်စ်, et al ။ (2018) ။ NAD + + ဖြည့်စွက် Key ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမားအင်္ဂါရပ်များနှင့်မိတ်ဆက် DNA ကိုပြုပြင်ခြင်း Deficiency နဲ့နယူးအေဒီကြွက်မော်ဒယ်အတွက် DNA ကိုပျက်စီးတုံ့ပြန်ချက်ပုံမှန်။